UJavier Mariscal utata woyilo kaCobi umascot weOlimpiki | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJavier Mariscal utata woyilo kaCobi umascot weOlimpiki
UPablo Gondar | | Abadlali, Ukuphefumlelwa
UJavier Mariscal utata woyilo kaCobi umascot weOlimpiki Umntu odumileyo Ngo-1992 iiOlimpiki zaseBarcelona. Imele eyayo Uhlobo lwe-quirky apho imifanekiso enemibala ye ukubetha ngokukhawuleza bafumana amandla kunye nendlela ekhethekileyo yokubona umhlaba.
Uhlobo olwahlukileyo lokudala bayiphumezile yonke imisebenzi yabo Uhlobo lomtshato wakho apho ukucinga kunye nemibala egcweleyo zezona zinto zinomtsalane kuzo. Abantu abatshatileyo ngaphandle kwamathandabuzo a ireferensi yoyilo kokubini kubazobi kunye nabayili kunye nazo zonke iintlobo zamagcisa.
Udliwanondlebe noJavier Mariscal utata woyilo kaCobi
Kule vidiyo incinci sinokubona ulwazi malunga Inxalenye yobuqu yalo mzobi wegraphicNgaphandle kwamathandabuzo, ungumlinganiswa omangalisayo kwinqanaba lomntu kunye nelobungcali.
Sonke siyakhumbula UCobi umascot onobuhlobo kwimidlalo yeOlimpiki ka-1992 yase-Barcelona, intle lento Inja emntwisiweyo Usithabathe ukusuka kumzuzu wokuqala enkosi ngendlela azibonakalise ngayo kwilizwe ngezenzo zakhe ezihlekisayo.
Uyile Zonke iintlobo zeeprojekthi ezibonakalayo: intengiso, imizekeliso, ii-comics, ukusebenzisana kwefilimu, uyilo lwemveliso kunye nenani elingenasiphelo leeprojekthi zazo zonke iintlobo, ezenza ukuba abe ngumyili wemisebenzi eyahlukeneyo onako ngayo yonke into ebekwe phambi kwakhe.
Un iprojekthi yentengiso enomdla kakhulu yeyona ndiyenzela i Inkampani yeH & M. Kule projekthi sibona ngaphambili isitayile sakhe sokubonisa ngokukodwa apho enemigca elula iyakwazi ukwenza lula iifom ngandlela ithile engafumanekiyo kodwa ngohlobo oluthile lokuchukumisa.
Isitayile sakhe sinokufunyanwa kwiscreen esikhulu apho Ndithatha inxaxheba njengomzobi wefilimu Chico noRita. Ngaphandle kwamathandabuzo isitayile sakhe esihle sizise inqanaba elininzi kolu qikelelo lweemovie.
Sinokubona okuncinci UMarshal ngokunxulumene nale movie kule ividiyo encinci apho igcisa lithetha ngale projekthi. Lo myili weValencian akabonakali nje kuphela kwiiprojekthi zakhe zemizobo kodwa kunye ne uyilo lwefanitshala apho akwazi ukuzisa isitayile sakhe kwizinto zemihla ngemihla ezinje ngesitulo esilula.
Nge Isitulo seduplex I-Mariscal iyakwazi ukuzisa into ekruqulayo ebomini ngokuyijika ibe yinto ephilileyo, ephilayo kwaye igcwele amandla.
Enye uyilo lwefenitshala enomdla kakhulu yile isihlalo somntwana esimile okwenja yenziwe nguMariscal.
Indawo eyaziwayo kaMariscal yokuthatha imizobo ibe ngamanqanaba amathathu ivumele inja uJulián, omnye wabalinganiswa eLos Garriris, ukuba ibe isiqwenga sengqokelela yabantwana NamnguMagis. Le fenitshala yemisebenzi emininzi, zenziwe ngeplastiki Ngendlela yokubumba ejikelezayo, ngemibala esisiseko (mhlophe, bomvu, luhlaza okanye tyheli) kunye nobungqina bomntwana kunye nabantu abadala, inokuba sisihlalo, kodwa inganguloliwe, isikhephe, imoto okanye intaba ukunyuka, kuba umntwana onomfanekiso ngqondweni unokukwenza konke. Okanye isitulo esitofotofo esifumana indawo yaso kwigumbi lokuhlala labantu abadala. » Iwebhu yeJavier Mariscal
Akuthandabuzeki UJavier Mariscal ujika abe sisalathiso kwinqanaba lokuyila enkosi kwindawo yayo entle yokwenza uyilo lwentelekelelo kunye ethile umoya wobuntwana ilayishwe ngqondweni kunye nokutya okumnandi. Ukuba ungumzobi, umzobi okanye umyili we-Mariscal kufuneka abekho kwipotifoliyo yakho yesalathiso sobuchule.
Ungalibona iphepha lakhe lobuqu:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » UJavier Mariscal utata woyilo kaCobi umascot weOlimpiki